बाढीपिडित बस्तिमा झाडापखालाको प्रकोप, सरसफाइमा ध्यान दिन स्वास्थ्यकर्मीको सुझाव
गढीमाइमा योग बिज्ञान शिविर सम्पन्न
स्वास्थ्य प्रकाशित मिति: कलमपाटी
बारा ५ असोज //
बारा जिल्लाको महागढीमाइ नगरपालिकाको आयोजनामा बृहत योग बिज्ञान शिविर शुक्रवार सम्पन्न भएको छ । पतन्जली योग समितीको सहकार्यमा संचालन भएको ५ दिने निशुल्क योग बिज्ञान शिविरमा सयौ मानिसहरुले लाभ लिएका छन ।
शिविरमा योग कक्षा संचालन गर्नका लागी पतन्जली योग समिती नेपालका केन्द्रीय प्रभारी गुरु लवदेव मिश्रले ५ दिन नै शिबिर सचालन गरेका थिए ।
बाराको पवित्र धार्मिक स्थल गढीमाइ मन्दीर परीसरमा शिविर संचालन गरीएको थियो ।
शिविरमा पतन्जली योग समिती केन्द्रीय समितीका गुरुहरु टिका खतिवडा ,प्रदेश ३ का सल्लाहकार राजेन्द्र थपलिया, प्रदेश ३ की महिला सह प्रभारी कविता थपलिया, प्रदेश २ का अध्यक्ष हरीहर चौधरी लगाएतका पतन्जली योग समितीका पदाधिकारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
असोज १ गते बाट आरम्भ भएको शिविर असोज ५ गते शुक्रवार सम्पन्न भएको हो । शिविरमा योग र आयुर्वेदको बिषयमा चर्चा समेत गरीएको थियो ।
एक दिने नि:शुल्क अायुर्वेद स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न - 2018-05-01
राैतहट : रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा एक दिने निशुल्क आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ ।
प्रदेश २ को स्वास्थ्य सेवा स्तर बढाउन कार्यदल गठन - 2018-04-13
स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुको प्रदेश २ को सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी स्नातकोत्तर इन्स्टिच्युट बनाए मात्र त्यहाँ स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार हुने बताएका छन् ।
जनताको स्वास्थ्य संग खेलवाड निशुल्क बितरण गर्ने औषधी म्याद नाघेको पठाइयो ! - 2018-04-08
रौतहट २५ चैत्र // चन्द्रपुर नपा १ मा रहेको पौराइ स्वास्थ्य चौकीमा म्याद नाघेको औषधीहरु पठाइएको छ ।
चार महिना देखी स्वास्थ्य सस्थाका कर्मचारीले तलव पाएनन - 2018-04-08
चन्द्रपुर २५ चैत्र// रौतहटको चन्द्रपुर नगर क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य सस्थामा कार्यरत कर्मचारहिरुले चार महिना अघि देखी तलव नपाएको गुनासो गरेका छन ।
अस्पतालभित्र फोहोरै फोहोेर, एक अर्कालाई आरोप - 2018-03-18
सप्तरी : पहिला सगरमाथा अञ्चल अस्पताल । पछि अस्पतालको अगाडि मधेशका नेता स्वर्गीय गजेन्द्रनारायण सिंहको नाम जोडिएपछि अहिलेको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल । अस्पतालको नाममा केही परिवर्तन त भयो तर अवस्था भने पहिलाको जस्तै रहेको छ ।
गौर अस्पताल आफै बिरामी - 2018-02-26
रौतहट १४ फागुन // रौतहटको गौरमा रहेको ५० शैयाको जिल्ला सरकारी अस्पताल आफै बिरामी अवस्थामा छ । अस्पतालले दिने सेवा नपाएको भन्दै बिरामीहरुले गुनासो गर्न थालेका छन ।
सरकार संग सुइ छैन, होसियार बहुला कुकुरले टोक्ला ! - 2018-02-23
रौतहट ११ फागुन// जिल्लाका सरकारी स्वास्थ्य सस्थाहरुमा कुकुरले तथा स्यालले टेकेमा लगाउने एन्टीरेबिज भ्याक्सीन महिनौ अघिदिन देखि छैन । भ्याक्सीन नभएका कारण बिरामीहरुले महगो शुल्क तिरेर निजी अस्पतालहरुमा भ्याक्सीन लगाउनु पर्ने बाध्यता छ ।
चुरोट छाडेकोे २० मिनेटमै देखिन्छ यस्तो प्रभाव, २० वर्षमा के होला ? - 2018-02-11
अधिकांश चुरोट पिउने मानिसको भनाई एउटै हुन्छ‘चुरोट छाड्न मन त लाग्दैन, तर सक्दैसक्दिन ’ ।पक्कैपनि एकपटक चुरोटको लत लागेपछि त्याग्न त्यति सजिलो छैन । धूम्रपान त्याग्दा केही समयसम्म स्वास्थ्यमा असहजताको अनुभव भएपनि जब तपाईंं धूम्रपान छाड्नुहुन्छ, त्यसको २० मिनेटदेखि नै शरीरमा सकारात्मक प्रतिक्रिया देखिन सुरु हुन्छ ।
खाली पेटमा पानी पिउनुका फाईदा - 2018-02-10
एजेन्सी : पानी पिउदा पनि धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । अधिकांश रोग पेटमा नै उत्पन्न हुन्छन् त्यसैले खाली पेटमा पानी खानुको अर्थ धेरै छ ।
1717189	Times Visited.